ASAN-JIOLAHY SY FAKANA AN-KERINY :: Zazalahy roa lasan'ny dahalo natao takalon'aina • AoRaha
ASAN-JIOLAHY SY FAKANA AN-KERINY Zazalahy roa lasan’ny dahalo natao takalon’aina
Nanomboka ny zoma alina lasa teo no tsy nahitana ny zazalahy roa, folo taona sy dimy ambin’ny folo taona, nataon’ny dahalo takalon’ aina tany Bekapaika Tsaratanàna. Nandritra ny halatr’omby nataon’ireo dahalo am-polony, tamin’io zoma io, no nitondrana an-keriny ny zazalahikely roa tao an-tanàna.
Omby valo amby roapolo no voangonan’ireo malaso, mialoha ny nandosirany. Nanenjika sy nifanandrina tamin’ireo olon-dratsy ny mpanara-dia, izay nahitana ny mpitandro filaminana sy ny fokonolona. Vokany, tafaverina avokoa ny omby. Nisy olona roa tamin’ireo fokonolona naratra voatifitra.
Heverina ho nizarazara teny am-pandosirana ireo dahalo. Ny sasany nandroaka ny omby. Ny hafa nitondra an’ireo ankizy natao takalon’ aina nandositra tany amin’ny lalana hafa.
Niverina an-tanàna nitondra ny omby ny mpanara-dia sasany taorian’ ny fifandonana tamin’ireo dahalo. Nanohy ny fanenjehana sy fitadiavana an’ireo nalaina an-keriny ny mpitandro filaminana. Heno, omaly, fa tsy mbola votsotra izy roa lahy kely.
LOZA AN-DRANOMASINA :: Namoy ny ainy ny mpanamorin’ilay vedety rendrika
FANAFIHANA :: Tovolahy 22 taona anisan’ireo nandroba toerana fakàna vola